Nosy be Vehivavy iray novonoina dia nalevina teo an-tokontaniny
Fanafihana teny Antsahabe Tratra ilay jiolahy nifampitadiavana
Lehilahy iray no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny BC Anosy sakelika faharoa ny alatsinainy 18 mey lasa teo noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana.
Vaky trano teny Ankasina Lehilahy roa nampidirina am-ponja vonjimaika
Lehilahy miisa roa, 27 sy 30 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny kaomisaria 67 ha ny zoma 15 mey teo noho ny resaka vaky trano.
Fandrobana 99 tapitrisa Ar Olona 4 voasambotra tany Fenerive Est
Olona miisa 04 ahitana lehilahy 02 sy vehivavy 02 no voasambotry ny polisy miasa ao Analanjirofo izay isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafihana mitam-piadiana niseho tao amin'ny fokontany Ambodihazinina kaominina
Kaominin’Androhibe-Atsimondrano Nandravarava sy naka an-keriny ny dahalo
Ny alin’ny 12 mey hifoha omaly 13 mey dia nisy fanafihan-dahalo nitranga tao amin'ny kaominina Androhibe Atsimondrano.
Maty nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana ny olona iray fantatra tamin’ny anarana hoe Lala Ratinahery Gonçalves tany Nosy Be.
Novonoina ary nalevina teo an-tokontany ambanin'ny trano izay nipetrahany. Araka fanadihadiana izay natao dia namany akaiky azy no namono nahafaty azy, ary tsy vitan’ny famonoana tsotra fa mbola notaterina tamin'ny kamio 2 ihany koa entana tao an-tranony, hoy ny vaovao azo. Efa manao ny asany ny mpitandro filamanana sy ny vahoaka amin'ny fikarohana ireo nahavanon-doza.